Nyeinlatt.com: iPhone မှာ ကိုယ်ပိုင် Ringtone လေးထည့်ချင်ရင်
iPhone မှာ ကိုယ်ပိုင် Ringtone လေးထည့်ချင်ရင်
ဒီနေ့တော့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က iPhone မှာကိုယ်ပိုင်Ringtone
ထည့်ချင်တယ်၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ လို့မေးလာတယ်။ ကျနော်ကတော့ Software လေးတစ်ခု အကူအညီနဲ့
ကျနော် သုံးနေတဲ့ iPhone Ringtone လုပ်နည်းလေးကို ပြောပေးပါ့မယ်။ ပထမဆုံး Ringtone လုပ်ဖို့
Softwareapp; Aimersoft_iPhone_Ringtone_Maker_1.0.4.0 ကို download ချလိုက်ပါ။ ပြီးရင် install
လုပ်ပါ။ License အတွက် Keygen လေးထည့်ပေး ထားပါတယ်။ အောက်မှာ install လုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်နဲ့
Ringtone ထည့်ပုံကို ပြပေးထား ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်် ကျနော် Upload ထားတဲ့ Software app;က WinRAR file နဲ့ဆိုတော့ Install မလုပ်ခင် file ကိုအရင်ပြင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါကလဲ လွယ်ပါတယ်။ Download လုပ်ထား
တဲ့ WinRAR fileကို Right click နိုပ်ပြီး Extract to Ainersoft_iPhone_Ringtone_Maker_1.0.4.0/ကိုရွေး
လိုက်ပါ။Amersoft_iPhone_Ringtone_Maker_1.0.4.0 ဆိုပြီး Folder လေးတစ်ခု ပေါ်လာပါ လိမ့်မယ်။
အဲဒီ Folder လေးထဲမှာ Software app; နဲ့ Keygen ကိုတွေ့ရမှာပါ။
Software app; Aimersoft iPhone Ringtone Maker 1.0.4.0 ကို Right click နိုပ်ပြီး Open ကို ရွေးပါ။ (Left click ကို double click လုပ်ရင်လည်း ရပါတယ်)။ အောက်က ပုံလေးပေါ်လာပါမယ်။
Step (1) Next ကိုနိုပ်ပါ။
Step (2) I accept the Agreement ကို ရွေးပါ။ Next ကို နိုပ်ပါ။
Step (3) Next ကိုနိုပ်ပါ။
Step (4) Createadesktop icon ကိုရွေးပါ။ Next ကိုနိုပ်ပါ။
Step (5) Next ကိုနိုပ်ပါ။
Step (6) Finish ကိုနိုပ်ပါ။
Software ကို install လုပ်တာတော့ပြီး သွားပါပြီ။ Aimersoft iPhone Ringtone Maker 1.0.4.0 ကို License လုပ်ဖို့ Keygen လေးကို ဖွင့်ပါ။
အောက်မှပြထားတဲ့အတိုင်း Aimersoft iPhone Ringtone Maker 1.0.3.1 ကိုရွေးပါ။
ပြီးရင် Generate ကိုနိုပ်လိုက်ပါ။ Licensed e-mail: နဲ့ Registration code: တို့ကို copy လုပ်ပြီး ထည့်လိုက်ပါ။
Ringtone လုပ်ရန် Desktop ပေါ်မှ Aimersoft iPhone Ringtone Maker ကိုဖွင့်ပါ။ Add ကိုနိုပ်ပြီး မိမိ Ringtone လုပ်လိုသော Mp3 ကို ရွေးပေးပါ။ Ringtone အတွက် စက္ကန့် ၃၀ မှ စက္ကန့် ၄၀ အထိသာခွင့်ပြုထား တာမို့ မိမိ လိုချင်သောအပိုင်းကို Adjust လုပ်ပေးပါ။ Export to iTunes ကို အမှန်ခြစ်လေးလုပ်ပေးပါ။ ပြီးရင် Start ကိုနိုပ်လိုက်ပါ။
ကဲ.. ခုဆို ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ Ringtone လေးက iTunes ထဲကို ရောက်သွားပြီလားဆိုတာ ကြည့်ရအောင်။
iTunes ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ iTunes ရဲ့ ဘယ်ဘက်မှ Panel လေထဲက Ringtones ကို ရွေးပါ။ မိမိ လုပ်ထားတဲ့ Ringtone လေးကို တွေ့ရမှာပါ။
အဆင့်တွေများလို့ ခေါင်းရှုပ်နေပြီလား။ iPhone ထဲကို Ringtone ထည့်ဖို့ အချိန်ကျလာပါပြီ။ မိမိ iPhone ကို computer နှင့်ချိတ်လိုက်ပါ။ iTunes ရဲ့ ဘယ်ဘက်မှ Panel လေထဲက DEVICES ရဲ့အောက်က မိမိ iPhone ကို ရွေးပေးပါ။ ညာဘက်က box ထဲမှ Ringtones ကိုနိုပ်ပါ။ Selected Ringtones ကို ရွေးပါ။ Ringtones အောက်က မိမိ လုပ်ထားတဲ့ Ringtone ကို ရွေးပြီး iTunes ရဲ့ညာဘက်အောက်နားထောင့်က Apply ကို နိုပ်လိုက်ပါ။
ကိုယ်ပိုင် Ringtone လေး iPhone ထဲကိုရောက်သွားပါပြီ။ iPhone ထဲက Settings => Sounds => Ringtone ကိုသွားပြီး မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Ringtone လေးကိုပြောင်းလိုက်ပါ။ မိမိလုပ်ထားတဲ့ Ringtones တွေဟာ Custom ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။
မှတ်ချက် ။ ။ အဆင့်ဆင့်လုပ်နည်းတွေ ပြထားတဲ့ပုံတွေကို ပုံကြီးချဲ့ချင်တယ်ဆိုရင် ပုံပေါ်မှာ Left
Posted by Nyein Latt at 4:26 PM
hsan April 20, 2011 at 7:48 PM
Thanksalot brother !!!!!!!!!you haveagreat idea
Nyein Latt April 20, 2011 at 8:48 PM
Sure! Thanks for visiting my blog.
ငွေလမင်း May 18, 2011 at 11:03 AM
နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ အိုင်ဖုန်းထဲကို apply လုပ်တာ ဖုံးထဲက
setting>sounds မှာ ရောက်မလာဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ပြောပြပေးပါအုန်း
Nyein Latt May 18, 2011 at 7:16 PM
Ringtone အတွက် ကြာချိန်ကို စက္ကန့် ၃၀ မှ ၄၀ အထိသာ ခွင့်ပြုထားတာမို့ သက်မှတ်ထားတဲ့ ကြာချိန်ထက်ပိုနေတဲ့ Ringtone တွေကို iTunes မှာ apply လုပ်တဲ့အခါ The ringtone"xxxxx"was not copied to iPhone "xxxxx" because its duration is too long.ဆိုတဲ့ box လေးကျလာပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင်တော့ iPhone ထဲမှာပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Ringtone ရဲ့ကြာချိန်ကိုပြန်ညှိပြီး နောက်တစ်ခါ ပြန်ကြိုးစားကြည့်ပါ။ apply လုပ်လိုက်လို့ iTunes ရဲ့အထက်က ဘားမှာ IPhone sync is complete. OK to disconnect.ကို တွေ့ခဲ့ရင်တော့ Ringtone လေးက Settings > Sounds > Ringtone ထဲက Custom ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ရှိနေမှာပါ။